Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Samy miaro ny tontolony | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Samy miaro ny tontolony
Araky ny voalaza ombieny ombieny, any ambanivohitra no fonenan’ny ankamaroan’ny olona miaina eto amin’ny nosy, izany hoe fambolena sy fiompina no ataon’izy ireo antom-pivelomana. Na noho ny antony maro samy hafa aza tao anatin’ny am-polo taona faramparany izay, tsy vitsy ireo tantsaha nitsoa-ponenana, nitsapa ny vintany any an-drenivohitra, mbola ny tantsaha ihany angamba no maro an’isa eto Madagasikara. Tsy hita ho atao ankilabao anefa ny mpandraharaha, na momba ny famokarna na mikasika ny varotra dia mieli-patrana manerana ny nosy ny mpandraharaha. Eo ny orinasa goavana sady mampiasa olona maro no mikirakira harembe amin’ny fampiodinana ny orinasa, an-daniny koa ireo miasa ho an’ny tenany anivon’ny sehatra faran’izay bitika ary mbola tranga mitarika ny fitsinjarana toko roa ny tontolon’ny fandraharahana dia ny tsy fitovian’ireo anatin’ny sehatry ny lalàna sy ireo ivelany. Noho izay tsy fitoviana sata izay, mazava ho azy ny tsy fahafahana hampitovy ny fomba fitantanana ny roa tonta. Mety ahatalanjona ihany ny fahitana fa ireo voalaza fa any ivelan’ny sehatry ny lalàna no mihetsika dia tsy afaka ataon’ny fanjakana mody adino, asa na hetra na haba fa misy anjarany tsy afaka no tsy ho takina avy aminy, sady tsy mahazo manary toky momba ny fampidirana an’ireo mpandraharaha madinika izay manana fahavitrihana ao anatin’ny sehatra fampandrosoana fehezin’ny fanjakana.
Ireo mpandraharaha manaja ny fenitra mipetraka dia toy ny rehetra manana zavatra iraisana, nanangana fikambanana hiaro ny tombontsoany eto amin’ny fampirindrana ny fiarahamonina manoloana ny fanjakana. Arak’izany, mihaona matetika amin’ny manampahefana ny solontenan’ny mpandraharaha mba ahafahany mamelabelatra ny heviny momba ny fandaminana ny tontolon’ny fandraharana. Isan-taona izao, mialoha ny famitan’ny governemanta ny volavolan-dalàna momba ny vola-panjakana dia misy fihaonan’ny roa tonta.
Tsy ilaozan’ny fidiran’ny politika amin’izany. Raharaham-pirenena no resahina. Fa araky ny sata mifehy ireo fikambanan’ny mpandraharaha ireo, ny safidy politika no tsy manana anjara ao anatin’ny fifanakalozan-kevitra. Misy ihany angamba ny fitapitaka, fa samy tsara taiza hono ka mahay mifampihatsara ivelantsihy. Voatery arak’izany mitahitahy ny fomba fifandraisana amin’ny fitondrana ny mpandraharaha na iza na iza no eo. Misy anefa fotoana tsy afaka iodivirana anomezana ny hevitry ny tena. Lasa resabe ilay fanakatonana orinasa tsy nanefa hetra. Sarotra ho an’ny fkambanan’ny mpandraharaha no tsy hanaposaka ny heviny. Mbola sarotra kokoa ny fanehoana fanamelohana ny an-daniny na ny an-kilany. Tsy nanonona anarana tsy nanondro ny fanjakana ny fikambanan’ny mpandraharaha, fa noraisiny tamin’ny ankapobeny ny tranga ary samy amin’ny maha mpandraharaha an’izy ireo no amin’ny maha olom-pirenena azy ny fijerena an’izany. Ny hamehana ara-pahasalamana hoy izy ireo no nitarika fahasahiranam-be toy izao. Ny fitsotsofana orinasa mbola afaka hivelona, antoka ivelomana olona maro no mendrika imasoana. Aleo aloha manavotra aina rehefa miverina ny filaminana hiverenan’ny fanitsiana sy ny fitakiana rehetra momba ny hetra sy haba. Tsy mivantana fa mazava ny voalazan’ny mpandraharaha.